Nhau - Nyowani nyowani paCustom vakadzi vakadzi zvipfeko dhizaini masevhisi
Nyowani nyowani paCustom vakadzi vakadzi zvipfeko zvekugadzira masevhisi
Hupenyu hupfupi kwazvo kune isina kugadzikana, isingafadzi bhurezha!
Muvambi Wedu: Akagara achida shangu, uye anotarisira kuti vakadzi vese vanogona kupfeka shangu dzakakwirira dzinoenderana netsoka dzavo nekuvapa simba rakawanda. Yakavambwa yakazvimiririra shangu dhizaini mu1998, akaisa pfungwa pakutsvaga maitiro ekugadzira shangu dzechikadzi dzemazuva ano dzakasununguka uye dzine fashoni. Akatyora gungano ndokuritsanangura zvakare. Kuita kuti vakadzi vapfeke shangu dzakakwirira hazvichisiri basa rakaoma. Kupfeka zvitsitsinho zvakakwirira zvausina kusungirwa, enda kudenga muzviroto zvako.
Nekudaro, iye zvakare anoshuvira zvine simba kuti vanhukadzi vanogona kuzvibvarura kubva mukati mekupfeka nemakore emakore ekupfeka vakapfeka ruzivo. Iye akatofunga nezve chirevo chekuti "Wese munhu ane mbatya dzemukati dzakagadzirwa" kuti aone mukadzi wese akakodzera yavo yakasarudzika yemukati.
Iyi inzira yekuratidza vakadzi vazere nesimba, seksikäs, uye inofadza. Iye anotenda kuti seksikäs haisi yekufadza vamwe, asi kumwe kutaura kwekusununguka. Akatanga kugadzira hanzu yemukati mu2004.
Ane basa risingazungunuke, chinangwa chekutakura zvinorema, chiratidzo chevatengi kutanga, uye nebasa rekusangana nezvinodiwa nevatengi vese.
Anoti: isu takagara tichida kugadzira uye kusona, isu tinoda chaizvo chinetso, isu tinokwanisa kusona bhurugwa rakanyatsogadzikana iro rakaitikawo kuti rinotaridzika. Chikamu chakanakisa ndechekuti chakaita kuti vasikana vataridzike zvakanakisa!
vanhu vezuva nezuva mumabhurasi ezuva nezuva. mabhureki akasununguka, Silhouettes aive akapfava, makakombama aive akapora, uye hunhu hwaive husipo pamataiti! tanga tiri mubhizinesi kweanopfuura makore gumi uye chikamu chedu chaunofarira nezvazvo zvese ichiri chivimbo chatiri kukwanisa kupa vatengi vedu. Vanhu vanobva kure kure seAmerica uye vepedyo sepedyo musuwo vauya zvavo, vakasununguka, vanodakadza, vakagadzirwa-kuyerwa, mawaya-asingambo-kubaya, tsika bhurugwa.